Kooxo Badan Oo Isku Heystaan Mustaqbalka Qadka Dhexe Dunida Eduardo Camavinga
Home Horyaalka France Kooxo badan oo isku heystaan mustaqbalka Qadka dhexe dunida Eduardo Camavinga
Da ‘yarkaan oo si weyn loogu amaaney inuu yahay mid ka mid ah dhalinyarada ugu fiican kubada cagta adduunka ayaa lala xiriiriyay kooxo badan oo miisaan culus sababtoo ah qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ayaa keentay in isha lagu wada hayo.
Eduardo Camavinga wuxuu noqon doonaa qadka dhexe ee ugu fiican adduunka sida laga soo xigtay wakiilkiisa Jonathan Barnett kaasoo sheegaya in prodigy Rennes ay u badan tahay inuu ku kici doono qof kasta oo ka badan 50 milyan euro (£ 43.5m / $ 60m).
Da’yarka, oo si weyn loogu amaaney inuu yahay mid ka mid ah da’da yar ee ugu fiican kubada cagta adduunka, ayaa sidoo kale ka tagi doona gurigiisa haatan ee Ligue 1 oo ah waxaana wada xiiseynayaan afar ama shan naadi oo ay la socdaan Real Madrid iyo Barcelona oo labaduba ah meelaha ay ku imaan karaan sida uu sheegay wakiilkiisa.
Camavinga ku dhashay Angola oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay xulka qaranka France sanadkii hore, ayaa xilli ciyaareed kale oo cajiib ah la qaatay kooxda Julien Stephan laakiin waxaa la filayaa inuu noqdo mowduuca xagaagan laga baadi goobo Suuqa ciyaartoyda.
Barnett ayaa si gaar ah ugu sheegay Goal. Waxa uu jecel yahay Rennes, waqtigan xaadirka ah, dhab ahaan uma aanan qaadin kooxaha kale. Ma ahan mowqifkeenna.
Aynu aragno waxa dhici doona goor dambe, laakiin si fiican ayuu uga shaqeeyaa Rennes taasna waa hagaagsan tahay. Ahaanshaha qadka dhexe ee adduunka ugu fiican, taasi waa sida aan u arko mustaqbalkiisa, oo leh billado badan iyo koobab badan.
Barnett ayaa sidoo kale ka horyimid wararka la isla dhexmarayo ee ah in Madrid ay weli tahay halka loo doorto Camavinga, in kasta oo uu qiray inay weli tahay mid ka mid ah xulashooyinka la xushay isagoo intaas ku daray inuu rajeynayo in wareejin kasta uu amro lacag aad u badan.
Madrid waa koox weyn, waa koox weyn oo loo ciyaaro,” ayuu raaciyay. “Eduardo wuxuu dooran doonaa kooxo badan haddii Rennes uu go’aansado inuu sii daayo. Waxay noqon doonaan mid ka mid ah afarta koox ee adduunka uu aadi karo.
“Eduardo wuxuu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro koox sarre. Madrid waa mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka, sidoo kale waa Barcelona.
Mar la weydiiyay haddii Camavinga uu ku kici doono wax ka badan € 50m, wuxuu raaciyay: \_”Waxaan u maleynayaa sidaas.
In kasta oo Rennes ay xaqiijisay kubbadda cagta Champions League xilli ciyaareedkii hore, waxay hadda fadhiyaan kaalinta shanaad ee Ligue 1, in ka badan dhowr iyo toban dhibcood oo ka dambeysa kaalinta saddexaad ee Lyon ee isreebreebka kooxaha ugu sareeya Yurub.
In kasta oo rajada laga qabo kubbadda cagta Europa League aysan ahayn wax laga khafiifiyo, haddana waxay soo jeedineysaa in rabitaanka Camavinga ee ah inuu isku tijaabiyo meesha ugu sarreysa ay ka dhigeyso inuu u furnaado tallaabo weyn oo ka timid kooxdii ku soo martay da ‘yarta.
Si kastaba ha noqotee, Rennes waxaa laga yaabaa inay la halgameyso sidii ay ula jaan qaadi lahayd nooca lacagta ah ee Barnett ay soo jeedisay, gaar ahaan muuqaalka wareejinta ee Covid-19 halkaas oo xaaladaha dhaqaale ee naadiyo badan ay ka sii daran yihiin sidii hore.
Taasi waxay tidhi, warbixinadii hore waxay soo jeediyeen in Camavinga uu damacsanaa inuu ka tanaasulo kuwa culus ee heshiiska cusub ee Rennes sida ugu dhakhsaha badan bisha Janaayo, taasoo muujineysa inuu ku faraxsan yahay inuu la sii joogo mustaqbalka dhow.
Previous articleEverton oo isha ku heysa Qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot.
Next articleAC Milan oo bartilmaameedsaneysa Emerson-ka Barcelona si uu ugu badalaan Diogo Dalot